Nin Liibiyaan ah Oo lagu xukumay 22 sano oo xarig ah | Afrikada
Nin Liibiyaan ah Oo lagu xukumay 22 sano oo xarig ah
Nin Liibiyaan ah ayaa lagu xukumay 22 sano oo xarig ah kadib markii lagu qaaday dacwad la xiriirta weerar sanado ka hor lagu dilay safiirkii Mareykanka ee Liibiya.
Magaalada Benghazi ayaa weearaku ka dhacay. Ninkaasi ayaa lagu magacaabaa Axmed Abu Khattala waxaana lagu xukumay magaalada Washington maalinimadii Arbacadii waxaana si gaar ah loogu heystaa door weyn ka ciyaaray weerarkaas.
Gaar ahaan weerarkaasi ayaa lagu qaaday qunsuliyadii Mareykanka ee Benghazi sanadkii 2012. Waxaa safiirka ka sokow halkaasi ku geeriyooday saddex qof oo kale oo ka shaqeynaayay qunsuliyadaasi. Maalintii 11aad ee bishii 9aad ee sanadkii 2012 ayaa weerarku dhacay.
Safiirka la dilay ayaa magaciisu ahaa Christopher Stevens. Waxaa waxyaabaha dacwada ku xusan kujira in asaga iyo jabhad uu la jiray ay dhaawac u geysateen hanti ay leedahay dawlada Mareykanka oo taalay qunsuliyada.
Muran xooggan ayaa ka dhashay dilka safiirka kadib markii dawladii waagaa oo Hillary Clinton ay ka ahayd xoghayaha amuuraha dibada ee Mareykanka lagu eedeeyay inay difaaci weyday diblomaasiyiintii dalkaasi u joogay.
Khattala ayaa gacanta lagu soo dhigay sanadkii 2014 waxaana soo qabtay ciidamada Mareykanka. Intaasi kadib waxaa lagu xiray markab gudihii muddo asbuuc ah kahor intii aan loo gudbin Mareykanka.
SAWIRKA NINKA LA XUKUMAY: